Tik Tok ပေါ်ရောက်လာတဲ့ အိမ်အိုကြီးထဲက တစ်စုံတစ်ယောက် (ရုပ်သံ) – Myanmar
September 18, 2020 admin News, Travel, Weird, Wonder 0
လက်တလော Tik Tok မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကျောချမ်းဖွယ်ရာ ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် ။ ဒီဗီဒီယိုကို ရေဗက္ကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူဦးရေ ၁.၈ သန်းထိတောင် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ဒီဗီဒီယိုက သူမကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ရေဗက္ကာရဲ. မိခင်ဟာ တောင်တက်သွားတဲ့ လမ်းတစ်နေရာမှာ တွေ့ရတဲ့ အိမ်အိုကြီးကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး သမီးဖြစ်သူကို ပို့လိုက်တာပါ ။ သူမက အစကတော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပါပဲ ။နောက်တော့ ဗီဒီယိုထဲက ပြတင်းတစ်ခုရဲ. မှန်မှာ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ. မျက်နှာကို မပီဝိုးတဝါးတွေ့တာနဲ့ သူမရဲ. Tik Tok မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုသူအထူးများပြားခဲ့ပြီး လူအတော်များများက ထိတ်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအိမ်အိုကြီးဟာ လူမနေပဲ စွန့်ပစ်ထားခဲ့တာ အတော်ကြာပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Tik Tok မှာ ကွန့်မန်ရေးသူတစ်ယောက်ကတော့ အဲ့ဒါဟာ ခရီးသွားတွေ အိမ်နားမကပ်အောင် အရုပ်မကို ထားထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မပြောနိုင်ပါဘူး။
Tik Tok ေပၚေရာက္လာတဲ့ အိမ္အိုၾကီးထဲက တစ္စံုတစ္ေယာက္ (ရုပ္သံ)
လက္တေလာ Tik Tok မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ရာ ဗီဒီယိုတစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္ ။ ဒီဗီဒီယိုကို ေရဗကၠာဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက တင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၾကည့္ရႈသူဦးေရ ၁.၈ သန္းထိေတာင္ ရွိေနခဲ့ပါျပီ။
ဒီဗီဒီယိုက သူမကိုယ္တိုင္ ရိုက္ကူးခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေရဗကၠာရဲ. မိခင္ဟာ ေတာင္တက္သြားတဲ့ လမ္းတစ္ေနရာမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အိမ္အိုၾကီးကို ဗီဒီယိုရိုက္ျပီး သမီးျဖစ္သူကို ပို႔လိုက္တာပါ ။ သူမက အစကေတာ့ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ပါပဲ ။ေနာက္ေတာ့ ဗီဒီယိုထဲက ျပတင္းတစ္ခုရဲ. မွန္မွာ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ရဲ. မ်က္ႏွာကို မပီ၀ိုးတ၀ါးေတြ႔တာနဲ႔ သူမရဲ. Tik Tok မွာ တင္လိုက္ပါတယ္။
ဒီဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈသူအထူးမ်ားျပားခဲ့ျပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိတ္လန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအိမ္အိုၾကီးဟာ လူမေနပဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့တာ အေတာ္ၾကာျပီလုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ Tik Tok မွာ ကြန္႔မန္ေရးသူတစ္ေယာက္ကေတာ့ အဲ့ဒါဟာ ခရီးသြားေတြ အိမ္နားမကပ္ေအာင္ အရုပ္မကို ထားထားတာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားရမယ့် ဖူးစာရှင် ဟုတ်၊ မဟုတ် သိနိုင်မယ့်အချက်(၅)ချက်